Baqattoonni Itoophiyaa 250 mana hidhaa Tanzaaniyaa keessatti dararamaa jiru - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baqattoonni Itoophiyaa 250 mana hidhaa Tanzaaniyaa keessatti dararamaa jiru
Baqattoonni Itoophiyaa 250, irra jireessi isaanii kanniin Oromiyaafi Kibbaa irraa ta’uu hinoolle, mana hidhaa Tanzaaniyaa gara garaa keessa jirachuun isanii beekameera. Hedduun baqattoota kanniinii hidhamanii kan jiran naannoo Kilimanjaroofi Taangaa jedhamuttii. Baqattoonni kunniin kan hidhaaf saaxilamaniif yaalii Afrikaa Kibbaa seenuuf godhan irratti daangaa Tanzaaniyaa hayyamaan ala qaxxaamuruu isaniiti, jedhu angawoonni biyyattii.
Tanzaaniyaan daangaa isii hayyamaan ala cabsanii seenuu akka yakka guddaatti ilaalti. Adabbiin nama daangaa cabsee seenees baay’ee hamaadha: Baqattoonni hanga woggoota hedduutti hidhamuu danda’an. Dabalataanis, dararaan mana hidhaa keessatti baqattoota kanniin irra gayus hedduu hadhaayaa akka ta’eedha kan hiimamu. Kanniin lubbuu isaanii dhabanis jiru jedhama.
Erga adabbii isaan irratti murtaaye xumuranii kan isaan eeggatu gara Itoophiyaa, biyya sababa rakkoo siyaasaafi diinagdeef irraa baqatanitti, humnaan debifamuudha.
Afrikaa Kibbaa seenuuf hedduu namootaaf dachii Tanzaaniyaa qaxxaamuruun dirqama ta’a. Yaalii kanaan wolqabatee baqattoota Itoophiyaa irratti rakkoon ciccimaan Tanzaaniyaa keessatti akka gayaa jiru yeroo adda addaatti gabaafamaa tureera.
Previous articleFilannoo 2015 fi kallattii xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa
Next articleHumni ittisa Itoophiyaa WBO adamsuuf daangaa cabsee Keeniyaa naannoo Sololoo seene